UVimba weeDola zase-US-Funda ukuRhweba
tag: KwiDola yaseMelika
The Idola yaseMelika currently struggles to backtrack from what could be its highest weekly fall in over a year on Friday, as investors pulled away from the greenback as they believe that the possible rate hikes this year have been fully priced in.
IDola yaseMelika iRhweba kwi-Upbeat Bias phakathi kokukhula koMngcipheko wokutya
Njengoko bekuxeliwe ngaphambili, umdla wotyalo-mali uthabathe iqhuma ukusukela ngoMvulo emva kokuba iimarike zithe zagxagxanyiswa ngamanyathelo othintelo ngoorhulumente kwihlabathi liphela ukunqanda ukusasazeka kweyantlukwano ye-Omicron, kwaye uSenator wase-US uJoe Manchin walahla uMongameli Biden's Build Back Better iphakheji yenkcitho yemali.
Ukuphawula malunga nomngcipheko-kwimvakalelo, abahlalutyi baseBrown Brothers Harriman baqaphele oko "Idola iyathamba njengoko iimpembelelo zokunciphisa umngcipheko ziqhubeka nokuhla," ukongeza oko "Kusenokwenzeka ukuba sikwixesha lokudityaniswa ngoku ngenxa yokungabikho kwabaqhubi abatsha."
Okwangoku, i-index ye-dollar yase-US (DXY) ithengisa ngokungathathi hlangothi kwi-96.11 ngexesha lokushicilela kwaye ihlala isondele kwi-96.938 ephezulu yonyaka erekhodwe ngoNovemba 24, ngokulindelekileyo kwexabiso lokunyuka kwe-US Fed.
Idatha yezoqoqosho ekhutshwe izolo ibonise ukuba ukuzithemba kwabathengi base-US kubone ukonyuka kweyoMnga, kubonisa ukuba uqoqosho luza kugcina ipateni ekhulayo ngo-2022, ngaphandle kokunyuka kosulelo lwe-COVID-19 kunye ne-tapered fiscal stimulus.
I-EUR, i-NOK, i-GBP, kunye ne-AUD yokuzuza ngokuchasene neDola yase-US Nangona i-Bullish Greenback Momentum
Ukuqhubela phambili, i-euro izuze idola ngoLwesine, njengoko ifumene i-1.1340 ephezulu. I-Aussie (i-AUD) enobungozi obunobungozi (i-AUD) nayo ifunyenwe ngokumelene nedola, irekhoda inyanga entsha ephezulu kwi-0.7240 kwiseshoni yokuqala yaseLondon ngoLwesine.
I-greenback iphinde yalahleka ngokuchasene ne-Norwegian krone (NOK), njengoko imali yaseNorway ifumene ukonyuka kwamaxabiso e-oyile kunye negesi kwaye idla ngokuba nemvakalelo yokonwaba ngexesha leKrisimesi.
Ekugqibeleni, iponti yaseBritane yongeze i-0.37% ngokuchasene nedola ukurekhoda ukuphakama kwenyanga entsha kwi-1.3406, nangona idatha yamva nje ibonisa ukuba uqoqosho lwase-UK lukhule kancinci kunokuba lwenze kwi-Q3 2021.
tags Forex, iindaba, Micron, KwiDola yaseMelika
Idola yaseMelika iphinde yaziqinisekisa njengoko i-omicron jitters iyancipha, izuza ngokuphakathi ngokuchasene neemali ezinkulu kwaye ihlale iqinile kwibala lemarike ekhulayo. Isalathiso sedola senyuka ngeepesenti ze-0.10 ukuya kwi-96.12, emva kokutyhala phezulu kwi-96.17.
Izinga lentswela-ngqesho lehle kakhulu nge-0.4% ukuya kwi-4.2%, ngcono kunoko bekulindelekile nge-4.5%. Izinga lokuthatha inxaxheba kwabasebenzi linyuke laya kutsho kuma-61.8%. Umyinge womvuzo weyure unyuke nge-0.3% kamama, ngaphantsi kokulindelwe ngu-0.4% kamama.
Inani labantu abaqeshwe kwi- I-NFP icandelo eUnited States ngoNovemba landa kuphela 210 amawaka, nto leyo kakhulu ngezantsi okulindelekileyo 525 amawaka abantu. Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, ukukhula kwemisebenzi ngenyanga kuye kwafikelela kuma-555,000. Iyonke imisebenzi yehle nge-3.9 yezigidi, okanye -2.6%, ukusuka kumanqanaba angaphambi kobhubhane ngoFebruwari 2020.
U-Kristalina Georgieva, uMlawuli oLawulayo we-IMF (MD), uthe ngoLwesihlanu wayenexhala lokuba ukubuyiswa koqoqosho lwehlabathi kulahlekelwa ngumphunga ngaphambi kokuba kubonakale ukwahluka kwe-Omicron. Ngenxa yoko, uqikelelo lokukhula kwehlabathi kunokwenzeka ukuba luhlaziywe ezantsi, utshilo, esongeza ukuba ukwahluka okutsha okukhawulezileyo kunokuphelisa ukuzithemba.
UGeorgieva wahlabela mgama wathi ukusebenza okuqinileyo koqoqosho lwase-US kunefuthe elihle kwamanye amazwe, kodwa ukuba i-US kufuneka ithathe iinzame zokulawula ukunyuka kwamaxabiso. Uqhube wathi ukuthotywa kwerhafu kunganceda uqoqosho lwehlabathi kwaye uphando loMmeli woRhwebo wase-US malunga nokuncitshiswa okulindelweyo kwamkhuthaza.
IDola yaseCanada iyenyuka kwiiNkcukacha zeNgqesho
NgoNovemba, ukuqeshwa kwenetha eCanada kwanda nge-153.7k, xa kuthelekiswa ne-31.2k ngo-Oktobha, kunye nezibikezelo zeemarike zenzuzo malunga ne-37k. Ingqesho yandisiwe ngokusisigxina (i-79.9k) kunye neyexeshana (73.8). Ukuqeshwa okunamandla kwicandelo leenkonzo kwaba noxanduva ikakhulu ekudaleni imisebenzi. Izinga lentswela-ngqesho lehlile ukusuka kwi-6.7 ukuya kwi-6.0 ekhulwini.
Ipesenti yokuthatha inxaxheba ifikelele kwithafa le-65.3 ekhulwini.
Imali yaseCanada kutshanje iye yenzakaliswa kukungaqiniseki kwehlabathi kunye nokuhla kwamaxabiso eoli. I-loonie ibuyiselwe namhlanje, kunye ne-USD / CAD ehla kwi-1.282 ukuya kwi-1.274. Icala lokuba iBhanki yaseCanada iqalise ukunyusa izinga lenzala kunyaka ozayo iqiniswa ngokuphucula ngakumbi kwimarike yabasebenzi. IBhanki yaseKhanada icebise ukuba inkqubo inokuqalisa kwikota yesibini okanye yesithathu. Iimarike sele zinciphise ukunyuka kokuqala ekupheleni kwekota yokuqala.
I-Dola yaseMelika iwela ngokuBalulekileyo ngokuBonisa ukuKhangelwa kweFED
Idola yaseMelika ibuthathaka xa kuthelekiswa nezinye iimali njengoko uxinzelelo lokunyuka kwamaxabiso kuqoqosho lwaseMelika luqinisekisiwe ngokukhutshwa kwedatha yaseCPI yaseMelika ngoSeptemba. Ngophawu, inqanaba ngokubanzi le-CPI lenyuka rhoqo ngonyaka, kwakhona lafikelela kwiminyaka eli-13 ephezulu.
Kwelinye icala, imizuzu kaSeptemba Ukutya Intlanganiso iqinisekisile izicwangciso zeFed zokuqalisa ukusika inkqubo yokuncipha yebhanki kulo nyaka, kwaye oku kusikwa kufanele kugqitywe phakathi ku-2022. Izivuno zase-US zazikwindlela esezantsi enikwa ubuthathaka bedola; Ixabiso legolide lafumana ithuba lokuhlangana njengoko intsimbi exabisekileyo ikwajongwa njengothango ngokuchasene noxinzelelo lwamaxabiso.
Amasheya aseMelika athumele inzuzo encinci izolo kwaye silindele ukuba izinto ezisisiseko ziqhubeke nokuxhasa umdla wabarhwebi, nangona ingqalelo ethile kulindeleke ukuba inikwe idatha yamabango yokuqala engenamsebenzi ekhutshwe kamva namhlanje, kunye nabenzi bomgaqo-nkqubo weFed ocwangciselwe ukuthetha namhlanje.
Umva wenqanawa wokuhambisa isikhongozeli unyukile kumazibuko aliqela aseMelika. Ngenxa yoko, ngokunyuka kwamaxabiso kunye nokuhla kwenqanaba lokungabikho kwemisebenzi, iFed inokuthi iqale ukuqinisa umgaqo-nkqubo wayo wezemali. Ngokwimizuzu ekhutshwe izolo, amagosa aliqela e-Fed alindele ukuba ukucothiswa kokuthengwa kweeasethi kungaqala kwangoko phakathi ku-Novemba. Amagosa amaninzi e-Fed alindele ukuba amaxabiso anyuke ngo-2022, ngokwesiqwenga secandelo.
Emva kwamanani okunyuka kwamaxabiso kunye nemizuzu yeFed, isibini se-EURUSD saphakama ngelixa idola yaseMelika yawa. Esi sibini sinyukile ngaphezulu kwenqanaba lokumelana ne-1.1585 kwitshathi yeyure. I-neckline yeepateni ezisezantsi ezantsi, inqanaba elisezantsi lalingu-1.1528, zafikelelwa ngeli xabiso. Ixabiso liwele ngaphezulu komyinge we-25 wosuku lokuhamba (MA), kwaye i-MACD iwele ngaphezulu kwenqanaba lokungathathi hlangothi. Ngenxa yoko, isibini sinokuqhubeka nokunyuka, nge-1.1630 njengophawu olukhulu olulandelayo lokubukela.
Ixabiso leDola yaseMelika liyancipha
Ifandesi eyomeleleyo yeminyaka engama-30 ibhondi ngobusuku bangaphambi kokulungelelaniswa kwakhona kwegophe lemveliso laseMelika, elibangelwe kukuhla kwezivuno zexesha elide kulandela idatha yokunyuka kwamaxabiso e-US, yathumela isalathiso sedola ukuhla. Isalathiso sedola sehle nge-0.54% ukuya kwi-94.00, emva koko yabonisa ukonyuka okuncinci e-Asia ukuya kwi-94.05.
Into engenakukhanyelwa kukuba isalathiso sedola silandelele eyona ndawo iphambili kwi-94.50, kwaye ukuvalwa kwemihla ngemihla ngaphezulu kwelo nqanaba kuya kuba sisalathiso esomeleleyo sokuqhubela phambili ukuya phezulu. Ngokoluvo lwam, yithontsi kuphela eliya kwi-93.50 okwethutyana elitshintsha umbono okwi-dollar yase-US.
Kufuneka iqatshelwe into yokuba icandelo lokudodobala kwedola yaseMelika kunokwenzeka ngenxa yenani elikhulu lezikhundla zeedola ezinde eziqikelelweyo ezenziweyo kwiimarike zekamva ngokuchasene neemali ezinkulu. Ngokubhekisele kwiimarike ezinkulu zotshintshiselwano lwangaphandle, ayisiyongxaki yokuba i-euro, iphawundi entle, kunye nefranc yaseSwitzerland inyuke ngaphezulu kwe-0.55% ngobusuku, emva kokuba ibipompiwe kwiintsuku zamva nje. Mhlawumbi okubaluleke ngakumbi, i-USD / JPY, i-AUD / i-USD, kunye ne-NZD / i-USD ihlala ingatshintshanga ngobusuku obunye, iphakamisa ukuba umahluko kwi
I-Dola yase-US iwela ngenxa yokuThatha iNzala njengoko ii-Equity zisanda
Idola yaseMelika ibuyise ezinye zeenzuzo zayo zakutshanje njengoko iimarike zentengiso zaseMelika ziphele ngolwesiHlanu ngethoni elungileyo, exhaswa lunyango lukaMerck lomlomo Covid-19, olonyuse ithemba lokuphakamisa ukukhula koqoqosho. Amaxabiso e-US nawo atyibilike kancinci ngolwesiHlanu, eqhubeka eyenzakalisa imali yase-US njengoko uxinzelelo lokuzola linciphisile ibhidi ye-haven. Ukuya kwi-94.07, isalathiso sedola sinciphile i-0.18 yeepesenti.
EAsia, i index dollar inyuke kancinci ukuya kwi-94.10 njengoko ikamva leminyaka eli-10 laseMelika lityiwe njengoko igridlock yowiso-mthetho yeDemokhrasi ibinzulu kwimpelaveki. Ngokubanzi, nangona kunjalo, iimarike zemali zaseAsia zizolile namhlanje ngenxa yeholide ezininzi kwingingqi.
Njengoko idola yaseMelika yawa, i-euro / idola kunye neponti / idola yabeka ulungiso ngolwesiHlanu. Nangona kunjalo, i-EUR / USD isephantsi kwe-1.1650 ukuza kuthi ga namhlanje kwaye isondele kufutshane nomgangatho wayo weveki. Ukubuyela umva kuphela ukuya kwi-1.1660 kunokutshintsha imbonakalo ye-bearish.
Iponti inyuke nge-0.50% ukuya kwi-1.3545 ngokuchasene nedola ngolwesiHlanu kwaye yawa kancinci ukuya kwi-1.3535. Isiphindezelo esinoburharha sinesiphumo sokuthengisa okukhohlakeleyo kwiveki ephelileyo. Ngokumalunga neponti yaseBritane, nokuba yeyamandla okanye eMantla eIreland / eYurophu, isekhona imingcipheko emininzi yokunqongophala kokunikezelwa kwempahla. Ukuqhambuka kuphela kwe-1.3620 kuya kunika umqondiso werhasi.
Idola ngokuchasene ne-yen ibuye yaya kwi-111.05 namhlanje, njengoko i-US isivuno sisehlise kancinci, sityhala idola lisezantsi ngolwe-Sihlanu. Ngaphandle kotshintsho lwenkulumbuso kunye nolonyulo oluzayo, i-USD / JPY iseyinto engqongqo yokwahlulahlula imveliso. Indawo yenkxaso yepivot iseyi-110.50. Imeko yokuthintela umngcipheko yehlile ngoLwesihlanu.
Ukuza kuthi ga ngoku, i-AUD / USD kunye ne-NZD / USD zombini zifumene ngaphezulu kwe-0.50% ukuya kwi-0.7296 kunye ne-0.6980. Ngokobuchwephesha, zombini zisabuthathaka, kwaye nakuphi na ukuncipha kwemvakalelo yomngcipheko kukhefu nje elifutshane. Emva kwamatyala e-Covid-19 axelwe ngaphandle kwe-Auckland kwimpelaveki, i-NZD / USD yawa namhlanje. Nangona kunjalo, urhulumente uza kuqhubeka ukuyiphungula imiqobo e-Auckland kule veki kwaye sele ebuyisile konke oku kulahleka.
Idola yaseMelika iXabiso, iThutyana kuphela
Ukusukela ilizwekazi lase China kunye ne-South Korea zivaliwe ngeeholide, iimali zaseAsia ziye zaba neseshoni ethe cwaka namhlanje, uninzi lwamaxabiso ashiyekileyo rhoqo ukuvalwa kwabo eNew York.
NgoLwesihlanu, iimali zaseAsia zinciphise ilahleko yabo njengoko idola yaseMelika iye yawa, kodwa ubuthathaka bedola yaseMelika yinto yokudlula, kwaye ukwehla kwayo kuya kubuya, ngakumbi kwi-INR, IDR, THB, kunye ne-PHP.
Nangona kunjalo, ngaphambi kwee-Payrolls zangoLwesihlanu zase-US ezingezizo ezokuFama, abatyali mali banokubakho ngeveki yokurhweba. Ipesenti efanelekileyo iya kunika amandla i-taper ye-Fed kwaye isebenze njengezingalunganga kwiimarike zemali zaseAsia.
Idola yaseMelika ilawula ukuHanjiswa kweemeko zeMarike ezingazinzanga
Ukuhlaziywa: 12 Septemba 2021
I-Dola yaseMelika: Uqoqosho lwaseMelika lwalufanele ukuba luhambe kakuhle ngolwandle ukusuka kuSuku lwaBasebenzi ukubheka phambili, kunye nokuzuza kwemisebenzi eqinileyo kunye nokukhula kwenkcitho kwezempilo. Endaweni yokuba uqoqosho lusilwa ziziphithiphithi ezingaphantsi eziziswe yi Ukwahluka kweDelta, okukhokelele ekunciphiseni kokuqesha kunye nokwehla kwemeko yabathengi njengoko unyaka uqhubeka. Sinethemba lokuba uqoqosho luza kuhlala lusendleleni, kodwa luya kudinga ixesha kunye nomonde.
Kule veki, sijonge emva ngexesha apho iDelta yayingeyona ngxaki inkulu. Amathuba emisebenzi afikelela kwinqanaba eliphezulu ngoJulayi, ngokweSaveyi yokuVula nokuVavanya ukuThathwa kwabaSebenzi (JOLTS). Nokuba uloyiko olunxulumene ne-Delta lubange ikhefu ngo-Agasti, ibango labasebenzi lihlala liphezulu.
Oku kuthetha ukuba inani lemisebenzi ekhoyo likhulu kunenani labantu abangaphangeliyo ngo-Agasti, okuthetha ukuba iifemu zisenokufuna ukufumana iindlela ezizezinye zokunyusa ingqesho. Ngenxa yesiphumo eshiyekileyo salo bhubhane, uqoqosho lomsebenzi luya kuthatha ixesha elide ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ooqoqosho balatha kwizizathu ezininzi zokuba kutheni abasebenzi bengasebenzisi oko kubonakala ngathi yimfuno engapheliyo yeenkonzo zabo. Omnye wabo, uncedo olunxulumene nokungabikho kwemisebenzi engxamisekileyo, lufikelele esiphelweni kule veki. Kuhlala kubonakala ukuba oku kuya kubangela ukungena kwabasebenzi abazimiseleyo. Akukho nto ibonisa ukuba kupheliswe izibonelelo ezongezelelweyo ngaphambi komhla wokugqibela wesizwe wabona ukwanda okukhulu kwengqesho.
Kule ngxelo ye-Beige Book yale veki, iinkxalabo zokhuselo ziye zakhankanywa rhoqo, zikhomba ukwehla kwemfuno yemisebenzi exhomekeke kunxibelelwano lwasentlalweni, njengokutya ngaphandle, uhambo nokhenketho. Ukwehla kungakhokelela ekubuyiselweni kutshintsho lwangoku ekusebenziseni ukusuka kwiimpahla ukuya kwiinkonzo.
Ngokubanzi, iimarike zitshisi kumacala omabini okubonelela kunye neemfuno ngenxa yeDelta. Nangona kunjalo, oku, njengamaza angaphambili, kunokwenzeka ukuba kudlule, kwaye xa kusenzeka, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuya kukhawulezisa. I-Fed iya kujolisa ekugcineni ukunyuka kwamaxabiso kwindlela ethe chu, enokuthi ifune ukwehliswa kwenqanaba lendawo yokuhlala kunye nokuphumla kokuthengwa kweeasethi ngasekupheleni konyaka.
I-Index yeDola yaseMelika ifumana kwakhona i-Shy yama-91.78 yeNqanaba leNkxaso
Kwiveki ephelileyo, isalathiso sedola yaseMelika siphinde safumana phambi kwenkxaso ye-91.78, ebonisa ukunyanzeliswa kwexesha elikufutshane. Kukho ithuba lokuba inzuzo evela kwi-89.53 ukuya kwi-93.72 iya kwandiswa, ngakumbi ukuba imeko yomngcipheko iya isiba mandundu. Ngokubanzi, nangona kunjalo, siyaqhubeka sithanda iipateni ezingama-89.20 njenge patheni yokudityaniswa kwamaza amathathu.
Ngenxa yoko, ukubuyiswa kweepesenti ezingama-38.2 kweepesenti ezingama-102.99 ukuya kuma-89.20 ngo-94.46 kungumqobo obalulekileyo kwi-DXY yokongamela ngaphambi kokuba ibe nethemba kwixesha eliphakathi.
Ukophula i-91.78 yenkxaso, okanye ukwaliwa ngo-94.46 kwimeko yokuqhubela phambili, kuya kuphakamisa ukuba yonke into ephantsi evela kwi-102.99 (2020 ephezulu) ikulungele ukuqalisa nge-89.20, kwaye mhlawumbi nge-88.25 (2018 esezantsi) nayo.
I-CAD Rallies Stall kwi-CPI Njengoko iDola idibanisa iPost FOMC
Emva komgangatho wokunyuka kwamaxabiso wabathengi onamandla kunokuba bekulindelwe, i-CAD inyuka kancinci kwiseshoni yokuqala yase-US. Nangona kunjalo, amandla kaLoonie alinganiselwe.
The ixabiso lomthengi eCanada inyuke ngo-0.6% umama ngoJulayi, lelona nqanaba likhawulezayo ukusukela ngoJanuwari. Isalathiso sexabiso sonyaka sabathengi sikhawuleze saya kwi-3.7% y / y ngoJulayi, xa kuthelekiswa ne-3.1% y / y ngoJuni, ephezulu kunokuba bekulindelwe kwi-3.4% y / y. Izinto ezintandathu ezisibhozo eziphambili, ngamaxabiso endlu enza elona galelo likhulu kunyuko lwamaxabiso endlu.
Isalathiso sexabiso sabathengi kwizabelo eziqhelekileyo zihlala zingatshintshanga kwi-1.7% YoY, engaphantsi kwe-1.8% yoqikelelo lweYoY. I-median CPI inyuke isuka kwi-2.4% YoY yaya kwi-2.6% YoY, engaphezulu kokulindelweyo kwe-2.4% y / y. Ukuncitshiswa kwe-CPI inyuke ukusuka kwi-2.7% y / y ukuya kwi-3.1% y / y, ephezulu kunokuba bekulindelwe kwi-2.5% y / y.
Idola yawa emva kweKomiti yeNtengiso yeOfisi evulekileyo (i-FOMC) ikhuphe imizuzu yentlanganiso yomgaqo-nkqubo kaJulayi. Amalungu aliqela agxininise kupapasho lwe-FOMC ukuba ukubhengezwa kokuchwethezwa kweeasethi akufuneki kuthathwe njengokuqala kwendlela emiselweyo yokunyusa inqanaba lomgaqo-nkqubo. Ngempendulo yokuqala, i-US Dollar Index (DXY), eyayifikelele kwelona nqanaba liphezulu ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli ngo-93.26, yehla yangaphantsi kwama-93.00 kodwa yakhawuleza yabuyisa ilahleko yayo. I-DXY yayicaba umhla we-93.13 ngexesha lokubhalwa.
ECanada, ukukhula kwamaxabiso kuyaqhubeka ukumangalisa ukuhla. Kwangelo xesha, iya ixhaphaka kuwo onke amanqanaba. Ifuthe lobhubhane ekunyuseni amaxabiso alivakali kwicala lokubonelela kuphela, apho ukuphazamiseka kwemveliso kunyuse indleko zeemveliso ezenziweyo njengeemoto, kodwa nakwicala lemfuno, apho inkuthazo yomgaqo-nkqubo inyuse inkcitho kwizindlu nakwizinto ezizinzileyo.
I-CAD: Ibuyela kwiLeshoni yeLeshoni njengoko ukunyuka kwamaxabiso kunyuka ngoJulayi
Ukuphendula kumanani aphezulu okunyuka kwamaxabiso wabathengi eCanada, isibini se-USD / CAD sabuyela kumgangatho ophantsi we-1.2600. Okwangoku, i-CAD inokuthambeka okuphezulu kwangaphakathi. Ukuphinda ubuye kwi-1.2421 kufuneka ujonge kuvavanyo lokuchasa kwi-1.2805 kuqala. Emva kwekhefu apho, lonke ulonyuso ukusuka kwi-1.2005 ukuya kwinqanaba leFibonacci le-1.3022 liza kuqala kwakhona. Ukophula i-1.2488 yenkxaso encinci ekwindla kuya kususa i-bias ibuyele ezantsi kwinkxaso ye-1.2421 nasezantsi.
Ngapha koko, i-CPI yeBhanki yaseCanada (ngaphandle kwezona zinto zinzima) inyuke ngepesenti eyi-0.6 ngenyanga kwinyanga ephelileyo kunye neepesenti ezi-3.3 ngonyaka, ukugqitha kulindelo lwepesenti eyi-0.1 kunye neepesenti ezi-2.8 ngokwahlukeneyo.
I-goodish bounce kumaxabiso eoyile ekrwada, kwelinye icala, ixhase i-loonie enxulumene nempahla kwaye yabeka uxinzelelo kwisibini se-USD / CAD. Kwelinye icala, ukungangqinelani komgaqo-nkqubo wokuqiniswa kwe-Fed kwakamsinya kunokuba kamva kuyehla, kubeka iinkunzi zeedola zaseMelika kukhuselo.
tags ICAD yaseCanada, KwiDola yaseMelika
Ukuhlala kweDola yaseMelika kuBango oluPhezulu, iiNtetho zeTaper kunye neVoti yeZibonelelo
Ukuhlaziywa: 10 Agasti 2021
Isalathiso sedola yaseMelika siqhubele phambili ngepesenti ye-0.20 ukuya kwi-92.97, ngovavanyo lokuchasa kwi-93.20 ejongeka ngathi inokwenzeka. Ukuqhubela phambili ukuya kwi-93.50 kwaye ekugqibeleni i-94.30 iya kwenzeka ngenxa yoku. Ikhefu kuphela lama-92.60 litshintsha ingxelo.
Imakethi ikwi-bearish mood eya kwiseshoni elandelayo, idola yaseMelika ibambe uzinzo kwiiveki ezintathu eziphakamileyo, incediswa yi-hawkish Fedspeak kunye nolindelo lwangaphambili Ukucoca ukutya kulandela ukuqhushumba kwe-NFP e-US. Njengoko uloyiko lwe-Delta covid lukhula, kunjalo nangemvakalelo ejikeleze imali ekhuselekileyo, ukubeka uxinzelelo ezantsi kwizivuno zase-US.
I-greenback ikwabambe umhlaba wayo phambi komthetho oyilwayo we-1 yezigidi zezigidi zeerandi, eziza kuvotelwa yiNdlu yeeNgwevu yase-US ngo-1500 GMT ngoLwesibini. “Sivumelene” ekwamkelweni kokugqibela komthetho osayilwayo weziseko zophuhliso, utshilo iNkokeli yeNdlu yeeNgwevu yase-US u-Chuck Schumer.
Impendulo yokuqala evela kubenzi bomgaqo-nkqubo weFed kwingxelo yengqesho eqaqambileyo yeveki ephelileyo ishiye abatyali-mali ngokungathandabuzekiyo ukuba ibhanki esembindini yase-US isondela kumgangatho wayo "wenkqubela phambili ebonakalayo" ekufezekiseni iinjongo zayo. Abongameli base-Atlanta Fed uRafael Bostic kunye noMongameli we-Boston Fed u-Eric Rosengren wacacisa ukuba iFed ingabhengeza ukuba izakuqala ukuthengela ukuthengwa kwempahla yenyanga nge $ 120 yezigidigidi ngoSeptemba.
UMongameli we-Richmond Fed uTom Barkin ubonakala ekholelwa ekubeni ukunyuka kwamaxabiso ngoku kubuyile ku-2%, kodwa ebengaqinisekanga ukuba ingakanani inkqubela esele yenziwe ekujoliseni ingqesho yeFed.
Idola yaseMelika ibaleka njengoko isivuno sinyuka
Ukulandela iingxelo zakutshanje zeFed, amaxabiso kaNondyebo atsibe ngakumbi ngoMvulo, eyandisa i-rally ukusuka kumzuzu weveki ephelileyo. Isivuno seminyaka eli-10 sikhuphuke saya ngaphaya kwe-1.30 yeepesenti, sonyuka ngokumangalisayo ukusuka kwiinyanga ezintandathu ezisezantsi ze-1.1270 yeepesenti kunye nokomeleza imali yase-US kakhulu.
Phambi kokuba i-selloff yakutshanje ibambe, isalathiso sedola sasithandana namanqanaba angama-93 okokuqala ukusukela ngoJulayi 23. I-euro kubonakala ngathi ithathe uxanduva lokufumana kwakhona idola, iwela kwinyanga entsha ezine eziphantsi kwe- $ 1.1724 namhlanje. Isikhundla se-ECB esibi, esaphindwayo, sinobunzima kwi-euro, hayi nje ngokuchasene nedola kodwa ngokuchasene nazo zonke iimali ezinkulu.
Ngelixa ukunyuka kwedola kuqhubekile ngobuchwephesha, amandla emali ngokuchasene neemali zempahla kunye neSterling kusafuneka iboniswe. Ukubonisa amandla asisiseko eDola, i-AUD / i-USD kuya kufuneka ityhoboze kwi-0.7288 esezantsi. Ukongeza, i-USD / i-CAD kufuneka igqibe ngokuchasana kancinci kwi-1.2605, ngelixa i-GBP / i-USD kufuneka igqibe ngenkxaso encinci kwi-1.3766. Ngaphandle kwalonto, i-rally yedola isesisiqingatha sentliziyo.
Idola yaseMelika Ukuhla kwexabiso njengoko iSwitzerland Franc izuza amandla
Idola liphantsi koxinzelelo oluthile njengoko ukuwa kweNondyebo kuvuna ubunzima kwidola. I-franc yaseSwitzerland ikwindawo ebonakalayo, eqhubeka nokuzuza ixesha elifutshane ngokuchasene nedola kunye ne-euro. Kwakuyinyanga enesiqingatha, ukuqala kokusebenza kwedola yaseMelika ukuya esiphelweni kwenyanga kuqhutywa yinxalenye yomgaqo-nkqubo ohlaziyiweyo ovela kwiFed kwi Intlanganiso ye-FOMC.
Eyona nto iphambili kuluvo lwezoqoqosho lokwehla kwedola yase-US kukuba ezinye iibhanki eziphambili ze-G10 ziya kuqinisa umgaqo-nkqubo phambi kweFed, njengoko ukukhula koqoqosho lwehlabathi kuhlala kuqinile. Ingxelo ephambili ethi “IKomiti iza kuqhubeka nokuvavanya inkqubela kwiintlanganiso ezizayo” icebisa ukuba kungathatha ixesha elide ukuvavanya "inkqubela phambili" yentlanganiso.
Iindaba zeJulayi ze-FOMC zibonakala ngathi zincedisile ekubuyiseleni ukuzithemba kumgaqo-nkqubo wezemali omtsha, obonisa ukuba buthathaka kunye nexesha elide lomgaqo-mali ojolise ekunyuseni ulindelo lwamaxabiso. Umongameli waseSt. “Ndingazama ngokukhawuleza ukucinezela.”
Ucele amanyathelo angxamisekileyo yokuphelisa inkqubo yokuthengwa kweeasethi. “Asihambi ngendlela efanelekileyo. Iimodeli zethu zithi le meko izinzile, kodwa okwangoku, izakube ingazinzanga, utshilo, "Ndifuna ukulungiselela ikomiti ukulungiselela umngcipheko wokuba le yimeko engalindelekanga."
Njengoko i-US Dollar iyehla, iSwitzerland yaseFransi ifumana amandla
Kwangoko emini, idatha evela eSwitzerland ibonise ukuba ukuzithemba kwabathengi kuphuculwe kakhulu ngoJulayi, kunye neemvakalelo zabathengi ezonyukela kwinqanaba eliphezulu ukusukela ngoJulayi ka-2010 ngo-8. Ngokwendlela abavakalelwa ngayo abathengi, isalathiso-ntloko sinyukele kwelona xabiso liphezulu (ngamanqaku angama-48) okoko isifundo saqala ngo-1972, ”utshilo u-SECO kupapasho lwayo, kwaye ukusukela oko yapapashwa le ngxelo, i-franc yaseSwitzerland iya isomelela.
Ukuwa kwesibini se-USD / CHF kuyaqhubeka namhlanje kwaye kufikelela kubuncinci be-0.9022. I-intraday bias ihlala i-bearish kwi-retest ye-0.8925 ephantsi. Kwelinye icala, ikhefu lokuchasana okuncinci kwi-0.9074 kuya kwenza ithoni ye-intraday ingathathi hlangothi.
Kodwa ukuwa okunye kuya kuthanda ukuba i-EMA ibambe i-0.9126. Emva kokubetha elona nqanaba lisezantsi ukusukela phakathi kuJuni nge0.9022, esi sibini kubonakala ngathi singene kwisigaba sokudityaniswa kwaye sagqibela ukulahleka yi-0.27% ukuya kwi-0.9039 ngeli xesha.